Mabhuku epamusoro Mahara, Muunganidzwa weMabasa Akanaka Kwazvo Kuverenga nekuKoshesa | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku epamusoro emahara
Kunyangwe hazvo zvakaoma kutenda, nhasi zvinokwanisika kuwana asingaverengeke emahara emabhuku pawebhu, zvese nevanyori vane mukurumbira, pamwe nevaya vari kungotanga mumabhuku. Chokwadi, zvinyorwa zvemazuvano nemunyori wedu watinoda hazviwanikwe mahara, asi kune dzimwe nzira dzinoverengeka dzinonakidza.
Kune akasiyana mapuratifomu edhijitari - senge Amazon- kuti vanokoshesa muunganidzwa wakanaka kwazvo wemabasa pasina muripo, iyo inovhara akasiyana zvinyorwa zvemhando. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti emahara mabhuku anowanikwa mu EBook, uye kuti kazhinji kazhinji zvinokwana chete kunyoresa kuti uwane idzi shanduro. Heano mamwe sarudzo munzvimbo ino.
1 Mhute uye naIshe weakavhunika Makristasi (2015)
2 Kudzoka kweThe Wolf (2014)
3 Kusvika pakuziva Alex naBea: Mimhanzi yangu ndiwe (2020)
4 Ndimutse ini kana gunyana kupera (2019)
5 Blue Mwedzi (2010)
Mhute uye naIshe Wemakristani Akaputswa (2015)
Iri ibasa rekufungidzira rizere nekufungidzira, rakagadzirwa nemunyori weMadrid César García Muñoz. Chinyorwa chayo chekutanga chakaburitswa muna 2015 uye chinowedzeredzwa nemamwe mabhuku maviris umo kusangana kweFog kunoenderera kuburikidza nehumambo hweiyo Yakaputsika Makristasi. Pasina kupokana, inoverengeka inonakidza, yakanangana nevaverengi vadiki, asi iyo inogona kubata vateveri vazhinji veinonakidza.
Zano rinotanga kana munhu asinganzwisisike akatambidza vakadzi vadiki vaviri bhuku rekare, iro rine nyaya yenyika yekufungidzira.. Ivo vanotanga kuverenga, uko kunounzwa Hans, ndiani mutambi anotungamira wekuudza nhoroondo yese. Tevere, Hans anorondedzera Niebla, mukomana wechiGypsy anobva kune yemashiripiti nyika inonzi: Humambo hweKaputsika Makristasi.
Niebla ane basa rakavanzika uye nekuda kweizvi anofanira kuenda kunyika chaiko. Pane imwe nguva aripo, anoita shamwari mbiri dzakanaka - imwe yacho Hans - waanofanira kudzokera naye kunyika yavo kuti agare akachengeteka. Asi chimwe chinhu chinokanganisa kuve munzvimbo yeiyo Yakaputsika Makristasi uye ivo vanofanirwa kutsvaga kubuda imomo, sezvavanoteverwa nevavengi vakasiyana siyana. Kuhwanda kunenge kuchikosha kuitira kuti urarame mukushamisika.
Mhute uye ishe we ...
Kudzoka kweThe Wolf (2014)
WechiSpanish Fernando Rueda ndiye munyori weichi chakavanzika uye espionage inoverengeka, zvidzidzo izvo munyori ari nyanzvi. Maari Inotaridza Mikel Lejarza, anonzi "El Lobo," semunhu mukuru, aive spy yeSpain. Munguva ye70s, Lejarza akakwanisa kupinda mukati nekuunza kukuvadza kukuru kuboka remagandanga ETA, kusunga nhengo dzinopfuura mazana matatu nekutyora chimiro chesangano kuSpain.
Iyo "yekufungidzira" nyaya yaMikel "El Lobo" Lejarza, makore makumi matatu mushure mekushanda kwake kweusori kuSpain. Mikel anga akavanda nguva yese iyi, achienda neshanduko dzakasiyana mumuviri nepfungwa dzinomukanganisa zvakanyanya mazuva ese. Kukundwa saka viga, hunhu anoenda kuDubai, kwaanosarudza kuve chikamu chechitokisi cheAl Qaeda.
Lejarza ishamwari yaKarim Tamuz, muMuslim uyo anomusuma kusangano remagandanga. Kufanana, CIA Tasks Mumiriri Samantha Lambert Kupedza Al Qaeda. Ella, mushure mekupinda, Anosvika kuna El Lobo kuti amutsigire. Mukudaro, anoramba kumubatsira, kunyange zvese zvichachinja mushure mekunge vese vadzidza nezvekurwisa kwemagandanga nyanyisa zvakanyanya kupfuura zve11 / XNUMX.
Kudzoka kweWolf kubva ...
Kusangana Álex naBea: Mimhanzi yangu ndiwe (2020)
Iyi nganonyorwa inyaya yerudo uye bhuku rekutanga rakanyorwa naEva M. Saladrigas, chizvarwa cheTarragona, anova nyanzvi mumhando iyi yemabhuku. Mumhanzi wangu ndiwe ingano ipfupi inoenderana neayo maviri makuru mavara: Bea naAlex.
Bea naAlex vanova shamwari kuburikidza nesocial network. Vaviri vane hupenyu hwakasiyana, asi hwakabatana nehunyanzvi. Bea mutambi weballet uye Álex muimbi anotsvaga kubudirira. Mushure mechinguva, ivo vanokwanisa kuwirirana uye kuonana ivo pachavo, ndinoona kuti zvakazungunusa uye zvakamutsa manzwiro mazhinji mune ese ari maviri.
Sezvo basa raAlex rinenge richikwira, Bea anokurirwa nematauriro ehukama hwavo ari kutora uye anopedzisira azviramba. Makore gare gare, Bea anonongedzwa naAlex, uyo ave mukurumbira; iye, nekusiyana, mushure mekurambana uye nemwanasikana, anorarama akamira mune chaiko. Shanduko zhinji dzinouya kuhupenyu hwezvose, uye nepo kusangana kuchizoitika, rudo, godo, mufaro uye mimhanzi zvinoita zvinhu zvavo.
Kusangana Álex naBea: ...
Ndimutsei musi waSeptember (2019)
Ndicho nhema nhema rakanyorwa naMonica Rouanet. Ndimutsei musi waSeptember Iyo yakaiswa pakati peEngland neValencian Albufera. Iyo nyaya inorondedzerwa neayo protagonist: Amparo. Paanenge achipfuura nekurasikirwa nemurume wake, anowanikwa nemwanakomana wake Toñete.
Amparo anogara mutaundi diki muAlbufera de Valencia, kwaanga achifamba nerufu rwemurume wake Antonio kweinopfuura gore.. Kunyangarika kwake panyama kwaigara kuri chakavanzika, sezvo chikepe chepfuma yake chine zvisaririra zveropa chakawanikwa, asi kwete muviri wake. Dhorobha rinotaura zvakawanda nezvenyaya iyi inoshamisa uye vane fungidziro dzakasiyana dzekufa kwaAntonio.
Pazuva rakajairika senge chero ripi zvaro, Amparo anogamuchira meseji inokurumidza kubva kumwanakomana wake Toñete, anogara kuEngland. Pakarepo, iye, sevamwe amai, anoenda kunobatsira mwanakomana wake. Ndichiri munyika yeChirungu, Amparo haigone kumuwana: mukomana anyangarika. Mukadzi, pasina kuve muongorori, anofanirwa kusunga zvakasununguka magumo kuiwana… mukuita kwacho uchaona zvakaoma zvakavanzika, vamwe vacho vaitoshamwaridzana nemurume wake Antonio.
Ndimutse kana ndapedza ...
Blue Mwedzi (2010)
WesiSpanish Francine Zapater, chizvarwa cheBarcelona, ​​akaunza muna 2010 iyo Blue Mwedzi, nyaya yekudanana neimwe fungidziro. Mutambo une vatambi vaviri vakuru: Estela Preston naErik Wallace. Icho chidiki chechidiki rudo, asi uine ruzivo rwunoita kuti rwusiyanane. Kubudirira kwake kwave kunoshamisa, akawana chinzvimbo chekutanga mu Amazon Kindle Vechidiki ine inopfuura makumi mana emazana maonero.
Estela musikana akadzikama kwazvo anongofunga nezve zvidzidzo zvake, mamiriro anochinja nekuuya kwaErick, akanaka akanaka mudzidzi wekuchinjana, uyo anokwanisa kumutora. Sezvo nyaya yavo yerudo ichiitika, mamwe mamiriro akaoma anotanga kuonekera kuna Estela, sezvo Erick anochengeta chakavanzika chikuru chinomomotera hupenyu hwake hwakadzikama.
Pie yaNathalie (2020)
Iyo ipfupi nyaya nemunyori wechiSpanish Carla Montero. Iyo rongero yakaiswa mutaundi diki rinonzi Saint Martin sur Meu, mumakore akatevera Hondo Yenyika II. Nyaya yakafemerwa nezvakaitika kune izvo zvinonzi "bâtards eBoches", Vana vakazvarwa nekuda kwekubatana kwevasikana veFrance nemauto eGerman.
Nathalie muridzi wechidiki wePatisserie Maison café mutaundi diki reSaint Martin sur Meu. Achitevera tsika yemhuri, akazvitsaurira kuchikafu. Vanhu vemuno vajaira kujaira, uye pie yeapuro iyo inogadzirirwa ne protagonist ndiyo imwe yetsika dzinodiwa dzenzvimbo iyi.
Kune rimwe divi ndizvo Pauro, jaya rakazvarwa kubva parudo rwepachivande pakati pemutungamiriri wechiGerman nemukadzi wechidiki wechiFrance. Nekuda kwehuremu hwemagariro ekuve mwana wepachipenga wemukuru weNazi -un Boches bâtard-, mukomana afunga kutiza. Zvisinei, panguva yerwendo rwavo, el runako Kunhuwirira kweapuro pie kunomuendesa kucafe yaNathalie.
Ikoko, vese vanosangana nemaziso avo kekutanga uye vanofarirwa. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, nyaya yerudo yakadzama inotanga iyo inopa Paul kudzoka chishuwo chekurarama uye chinoshandura zvachose hupenyu hwemudiki wepastry chef.
Pie yeapuro ye ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku epamusoro emahara
Bhuku rakanakisa kwazvo pasirese
Leon Felipe. Kusarudzwa kwenhetembo pazuva rake rekuzvarwa